Macedonian Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(345 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ...Nhasi, Makedhoniya ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi. Pamusoro pemakomo anoyevedza, madziva nemweya wakachena, zvinokwezva vashanyi uye makasino mazhinji. Kubhejera zviri pamutemo muMacedonia, nyika ine hurongwa hwepamutemo hwekupa marezinesi. Mushure mekugamuchira rezinesi, iwe unogona kuvhura yekubhejera kuvhurwa, nechikamu chemubhadharo kubva kukasino kuenda kumasocial services nekuvandudza kwenyika. Kubhejera kwakakurumbira kwazvo pakati pevagari vemo, mutambo unobvumidzwa kune vanhu vanopfuura makore gumi nemasere.
Cherechedzo yevashanyi kune yedu yepamhepo yekubhejera dhairekitori, pamusoro penzvimbo dzenyika-dzakasarudzika kuMasedhonia kune zvakare kune huwandu hwakawanda hwebhuki. Mabhukumaki anoita zvemitambo, akaonekwa kekutanga muMasedhonia muna 1999. Mushure memakore mashoma munyika muchishandira vanogadzira mabhuki vanodarika makumi masere, vakapiwa marezinesi nebazi rezvemari, uye huwandu hwevagadziri vemabhuku vanoramba vachikura.
Rwokutanga rwe10 Macedonian Online Online Casino Sites
Kubhejera pamhepo kwakapararira pakati pevaMacedonia, kunyanya pakati pevechidiki vari pasi pemakore makumi maviri nemashanu. Munyika inoshanda online kubheja nzvimbo seMasedhonia nevashandisi vekunze. Hurumende munguva pfupi yapfuura yakazivisa hurongwa hwekumisa monopoly pakupihwa pamhepo kubheja masevhisi. Zvinoenderana nemitemo mitsva yekubhejera pamhepo kuMasedhonia, kuwana nzvimbo dzisiri pamutemo dzinodziviswa. Vamwe vanopa zvakadai seBodog uye Partypoker, vakatosiya nyika.
Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuMasedhonia
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuMasedhonia, uye vachipa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji. Iwe unogona zvakare kuverenga edu ongororo yepamhepo kasino masosi, kuti uzive akanakisa epasirositi epamhepo, mabhonasi uye sarudzo dzekubhadhara dzinowanikwa kune vatambi vanobva kuMasedhonia.
Makedhonia - ino inoyevedza makomo nemhepo yakachena, kukwira uye rafting, kutandara pamakungwa uye kushanya kwakawanda. Vanouya pano kuzonakidzwa zvizere nezororo rinoshanda, asi zvakare kuzotamba mukasino, iri yakawanda zvekuti zvinoita sekunge ingadai iri muLas Vegas. Inotevera kumira ndeyeCasinoToplists muSkopje - iro risinganzwisisike guta reMasedhonia.
Masedhonia - Ruzivo nenzvimbo uye nhoroondo;
Kodzero dzekubhejera vashandi hazvina zvisingagumi.
Casino inonyanya kuzivikanwa kuMasedhonia:
HiT CASINO HOTEL neCasino Dojran;
Hotel Epinal neLeGrand Casino;
Idzidziso yepamutemo yevashandi vemunharaunda uye kune dzimwe nyika.
Zvitsva zvishanu zveguta guru reMakedhoniya Skopje nemakero;
Zvinoshamisa zvenyika uye vagari vayo.
Enda kuMasedhonia uye pfupisa zvakaitika kare
Makedhonia, anonyatsodaidza kuti Republic of Macedonia kana yaimbove Yugoslav Republic yeMacedonia (FYROM sezvakanyorwa muUN) - nyika diki iri pakati peEurope, haina nzira yekuenda kugungwa. Nyika dzepedyo dzepedyo: Serbia, Kosovo, Greece, Albania, Bulgaria.
Kunyange zvazvo zita racho rinokurumidza kushamwaridzana naAlexandro Mukuru, richiri mambo mukuru uye mutungamiriri wemauto akazvarwa muMakedhonia yekare, iri munharaunda yeGrisi.
Nyika yeMasedhonia, yakaumbwa muna 1991, inongovhara chete 35% yenharaunda, inova nharaunda yenhoroondo yeMasedhonia. Nekuda kwemazita emazuvano anozvarwa makakatanwa mazhinji neGirisi, iyo ine 65% yenharaunda.
Nhoroondo yeMasedhonia ine zviuru nezviuru zvemakore, kona iyi yeEurope yaive chikamu cheRoma uyezve neByzantine Humambo, Humambo hweBulgaria, Humambo hweSerbia, Humambo hweOttoman, Yugoslavia. Yakanyanya kufurira vanhu venguva yesocialist nehondo dzeBalkan.
Muna 1991, Makedhonia isina ropa yakabva kuYugoslavia. Iye zvino inyika yeparamende. Kuchinja kwezvematongerwo enyika kwakaratidza shanduko yezvakanaka. MuMasedhonia, mwero wakaringana wehupenyu. Nyika iri chikamu cheEU neNATO.
Casino uye kubhejera kuMakedhoniya
Nhasi, Makedhoniya ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi. Kuti uite izvi, zvikonzero zvakawanda, asi vamwe vafambi vanoenda nekuda kwekunyaradza uye kunakidzwa kutamba akawanda kasino.
Pamuganhu chaipo muGirisi yakavhura mhando dzakasiyana: dzimba dzakajeka dzekubhejera neminda yemizambiringa isingaperi. Kune makasino muSkopje - iro rakanaka guta guru renyika.
Mitemo yeMacedonia ndeyekuti kodzero yevanobhejera vanenge vasina muganho. Citizen kana expatriate vane mvumo yekuvhura kasino, kana vaine imwe huwandu paruoko. Mushure mekuwana rezinesi unogona kubvumidzwa kuronga kasino kune yako kufarira.
Muchikamu ichi chezvibereko zvakawanikwa mukubhejera zvivako zvinoshandiswa mukugadzirwa kwemigwagwa, kudzorerwa kwezviitiko zvekare uye zvinangwa zvevanhu.
Mazhinji eMakasia makasino anoshanda kutenderera nguva, asi zvirinani kutsanangura pre-purogiramu. Vaenzi vanofanira kunge vane makore gumi nemasere. Kazhinji kazhinji, kodhi yekupfeka inosanganisira zvekupfeka zvakapusa, asi kune akasarudzika makesi.
Casino inonyanya kuzivikanwa kuMasedhonia
Nyika haisi yakakura, asi mune rimwe guta guru rinofanira kuva nekasinositi.
Skopje ine makasino makuru matatu: Casino 23 - Bristol Hotel, Le Grand Casino - Holiday Inn Hotel, Viva Casino.
Iyo huru kasino muOhrid yakaoma Metropol Lake Resort & Casino.
MuGevgelija inzvimbo chaiyo yekubhejera. Pano pane upscale institution, inokwanisa kugutsa vatambi vanonyanya kudzvanywa: Casino Flamingo Hotel 5 *, Apollonia Casino, Casino Motel Senator, Princess International.
MuDoyrane vakagara HiT CASINO HOTEL neCasino Dojran.
Iyo inonyanya kukosha kubhejera yakagadzirwa ndiBitola Hotel Epinal uye LeGrand Casino.
Sezvo iri nyika diki, uye makasino mazhinji, vashoma chete vavo vane chinzvimbo. Asi zvakadaro inofanirwa kutariswa zvakanyanya Casino Flamingo Hotel 5 * kuGevgelija.
Iyi yekudyira yakasarudzika yakafanana nekamba kadiki kana inodziya dendere revanyoro pane akajairwa. Pamberi pepaki iri.
Kubhejera horo inogara matafura gumi nematanhatu ekutamba poker dzakasiyana siyana uye nhema, inewo matafura gumi eAmerican roulette. Vateveri vemuchina wekutsiva vanozowana wakaringana iwo - 16 slots.
Kunyangwe Flamingo ichishanda kwenguva yakareba, muna 2013, yakatsiviwa nemuridzi. Kutenda kune kudyara kwemamirioni makumi maviri neshanu euros kwakashandurwa zvachose.
kasino Princess International muGevgelija Casino chikamu chemubatanidzwa wepasi rese. Pano dhizaini yakasanganiswa pamwe neasingaonekwi zvivakwa zvemazuva ano. Varongi vanogara vachishanda kuti vagadzire yakasarudzika mamiriro. Kugara uchiitwa misangano, zviitiko, zvirongwa zvehoridhe, zvesimba zveyeredzi.
Le Grand Casino - Holiday Inn Hotera muSkopje - sarudzo yakanaka yekushandisa manheru ekuvaraidza. Iyo yekudyira yekushongedza iri pamahombekombe eRwizi rweVardar. Pedyo ndiyo nhare yezana ramakore rechitanhatu uye zambuko rebwe rezana regumi nemashanu. Kutamba pano kwakawanikwa 6 poker matafura, matafura gumi nemimwe yemimwe mitambo, gumi nemashanu slots.
Mitambo yepaIndaneti iri munharaunda yeMacedonia
MuMasedhonia, yakabvumidza ese marudzi ekubhejera zviitiko, kusanganisira basa repamhepo kasino. Munyika dzinoshanda nzvimbo dzevazhinji vashandisi, ese Makedhonia nemakambani ekunze.
Bhiriji rebwe. Kero: Keј Dimitar Vlahov broј 1 Skopјe 1000. Rimwe remabhiriji anonyanya kuzivikanwa pamusoro peVardar muguta guru. Bhiriji rakavakwazve kakati wandei uye rikagadziriswa, sekureva kwenyaya, kubva panguva yevaRoma.
Museum yehondo yeMacedonia. Kero: Mar 11th miniti, Skopјe 1000. Contemporary Museum kukakavara kwevanhu veMasedhonia kuve statehood uye rusununguko, yakavhurwa muna 2011.
Skopje Kale (Skopje Nhare). Kero: Centar, Skopјe 1000. Iyi dziviriro system yeMiddle Ages inomira pakati peguta uye ndiyo yakakosha monument yekuchera matongo.
Cathedral Chechi yeSt Clement weOhrid. Kero: Bul. Sveti Kliment Ohridski, Skopјe 1000. Kereke ine dome inoyemurika yakavakwazve muna 1970 panzvimbo yetembere yakafanana, yakaparadzwa nevaNazi.
Mutsvene Panteleimon Monastery. Kero: Zagreb 3 Skopјe 1000. Yakasarudzika krestokupolny tembere yakavakwa muzana re12th, muenzaniso wakanaka wekutanga medieval mapurani.
Chokwadi chinofadza pamusoro peMasedhonia neMacedonia
VaMasedhonia - vanonyanya kuda nyika uye vanoita zvematongerwo enyika.
Vazhinji vevakadzi veMacedonia havana kushanda, uye vanoitisa kumba uye vachirera vana.
Mandolin - ChiMasedhonia nyika chiridzwa chemimhanzi.
Nyika 5 mazana emakore yaive pasi peTurkey kutonga, saka mune tsika uye mimhanzi inonyanya kuyeuchidza yeTurkey.
Lake Ohrid - imwe yeakare pasi pano, makore mashanu emamiriyoni.
Oro - iyo yekutamba yenyika, iyo yakafanana chaizvo nekutamba. Asi ruoko ruoko, unofanirwa kugadzira tsoka dzakaomarara tsoka.
0.1 Rwokutanga rwe10 Macedonian Online Online Casino Sites
2.1 Kubhejera kuMacedonia
2.2 Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuMasedhonia
3 Kubhejera kuMacedonia
3.0.1 Enda kuMasedhonia uye pfupisa zvakaitika kare
3.1 Casino uye kubhejera kuMakedhoniya
3.1.1 Casino inonyanya kuzivikanwa kuMasedhonia
3.2 Mitambo yepaIndaneti iri munharaunda yeMacedonia
3.2.1 Skopje kukwezva
3.2.2 Chokwadi chinofadza pamusoro peMasedhonia neMacedonia
yemahara kasino mari online